Fihaonan’ireo bilaogera Arabo faharoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2019 9:13 GMT
Ny Heinrich Boell Foundation sy ny Global Voices dia mikarakara Fihaonana faharoa an'ireo bilaogera Arabo ao Beirota nanomboka ny 8 hatramin'ny 12 Desambra 2009. Ity fihaonana ity dia tohin'ny Fihaonan'ireo bilaogera Arabo voalohany natao tamin'ny volana aogositra tamin'ny taona lasa tany Beirota ary fihaonana voalohany tahaka izany, mamory ireo bilaogera Arabo mba hifanakalo traikefa. Tamin'ity indray mitoraka ity, ireo bilaogera avy amin'ny firenena Arabo 18 no nasaina hanatrika ny fampiofanana lehibe sy fihaonan'ny tambajotra tanora mpikatroka an-tserasera.
Vao haingana, ny bilaogy no loha-laharana amin'ny fanentanana ara-politika sy fikatrohana manerana ny tontolo Arabo. Ahitana ny forum ho an'ny daholobe izay manampy ny olom-pirenena hampihatra sy hanamafy ny zon'izy ireo amin'ny fahalalaham-pitenenana ary manamafy ny fahaizan'izy ireo miady hevitra sy manadihady. Manome sehatra ho an'ny fahasamihafana kokoa, fanekena bebe kokoa ny fahamaroana, ny tamberina andraikitra sy ny mangarahara ny bilaogy. Ho an'ny tanora indrindra indrindra, dia toerana ho an'ny eritreritr'izy ireo sy ny fihetseham-pon'izy ireo ny bilaogy, ary koa sehatra iray ahafahan'izy ireo mivezivezy malalaka (antserasera).
Araka izany dia tena zava-dehibe ny fanohanana hatrany ity fitaovana mahasoa ho an'ny fanehoan-kevitra sy fikatrohana ity ao amin'ny faritra ary manampy ireo bilaogera amin'ny fanehoan'izy ireo hevitra.
Mandritra ny fihaonana mikatona maharitra dimy andro, hiara-hiasa ireo bilaogera Arabo sy iraisam-pirenena mba hanatsara ny fijoroan'izy ireo eo amin'ny tontolon'ny famahanam-bilaogy iraisampirenena, mba hahatonga ny feon'izy ireo ho re, ary hikarakara hetsika an-tserasera sy ivelan'ny aterineto mba hiadiana amin'ny sivana sy hitakiana ny fahalalahana maneho hevitra. Ankoatra izay, ny tanjon'ity fihaonana ity dia ny hanomezana fahafahana ho an'ireo bilaogera Arabo mba hanorina tambajotran'ny firaisankina.
Ny bilaogin'ny fihaonan'ny bilaogera Arabo faharoa